Horudhaca kulanka ay kooxda Manchester City caawa soo dhoweynayso Atalanta ee Champions League – Gool FM
Horudhaca kulanka ay kooxda Manchester City caawa soo dhoweynayso Atalanta ee Champions League
Haaruun October 22, 2019
(Manchester) 22 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa kulan ka tirsan Champions League waxa ay caawa ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Etihad naadiga reer Talyaani ee Atalanta.
Kooxda reer England ee Man City ayaa doonaysa inay caawa guul gaarto si ay hoggaanka Guruubkeeda C ugu qabato sagaal dhibcood.
Kooxda Talyaaniga ka socota ee Atalanta ayaana wax guul ah gaarin illaa iyo haatan waxaana Guruubkan C ay ka hoggaaminaysaa halka ugu hooseysa iyadoo aan lahayd xitaa hal dhibic.
Taariikhda: Talaado, 22 Okt 2019
Garsooraha: Orel Grinfeld (Israel)
Nicolas Otamendi iyo Kyle Walker oo ka maqnaan kooxdooda kulankii ay Sabtidii guusha ka gaartay Crystal Palace, maadaama ay dhaawac iyo xanuun la maqnaayeen ayaa labaduba ku soo laabtay tababarka Axaddii waxaana ay ciyaari karaan kulankan caawa.
John Stones oo dib uga soo laabtay dhaawac ayaa ka soo kacay kursiga keydka kulankii Palace waxaana uu ku soo bilaaban karaa safka hore ee kulankan wax ka badan hal bil oo uusan safka hore ka soo muuqan, Rodrigo ayaa khadka dhexe ciyaari kara, iyadoo Fernandinho la nasinayo.
Kevin De Bruyne iyo Benjamin Mendy ayaa sidoo kale dhaawac ka soo laabtay kulankan, waxaana kaliya la xaqiijiyey in xiddigaha ka maqnaanaya Man City ay yihiin Leroy Sane iyo Aymeric Laporte.
Riyad Mahrez iyo Sergio Aguero oo ahaa todobaadkan bedel aan la isticmaalin ayay u badan tahay inay safka hore ku soo laabtaan kulanka caawa.
Aguero ayaana caawa u safan kara kooxdiisa kulankiisii 100-aad ee tartammada Yurub, halka Bernardo Silva uu ka soo muuqan karo kulankiisii 49-aad ee kulammada kooxaha Yurub.
Dhinaca kale Duvan Zapata ayaa seegay kulankii kooxdiisa Atalanta ay barbaro 3-3 la gashay Lazio todobaadkan, waxaana uu qabaa dhaawac iyadoo weeraryahanka reer Colombia uu ka maqnaan karo kooxdiisa gebi ahaanba kulankan.
Josip Ilicic oo kursiga keydka ku jiray kulankii Sabtidii ayaa la rajaynayaa inuu dib u bilaabo inuu safka hore ku soo laabto, halka Simon Kjaer ay isku doon saaran yihiin.
>- Manchester City ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay UEFA Champions League.
>- Kooxda Man City ayaa guul gaartay lix ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay tartankan UEFA Champions League.
Horudhac: Galatasaray vs Real Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Champions League)
Guud ahaan kulammada caawa la ciyaari doono ee UEFA Champions League & Saacadaha ay soo geli doonaan